Mike Pompeo Oo Dhallaaceeyey Hab-Dhaqanka China Ee Muslimiinta | Hayaan News
Mike Pompeo Oo Dhallaaceeyey Hab-Dhaqanka China Ee Muslimiinta
October 11, 2019 - Written by admin
USA(Hayaannews):-Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in sida ay China ula dhaqanto muslimiinta, oo ay ku jiraan dadka Uighurs ee Galbeedka China, ay tahay “Xadgudub weyn oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.”
Pompeo ayaa ballan-qaaday in Washington ay sii wadi doonto inay arrintan dadka ku baraarujiso.
“Tani ma ahan oo kaliya xadgudub weyn oo ka dhan xuquuqda aadanaha, balse sidoo kale ma rumeysnin inay tahay wax u wanaagsan dunida, ama in China ay ku lug yeelato dhaqan noocan ah.” Ayuu Pompeo ku yiri wareysi uu siiyey taleefishinka PBS.
Mar waxa laga weydiiyey in madaxweynaha China Xi Jinping uu mas’uul ka yahay, Pompeo waxa uu yiri “Xi Jinping waxa uu hoggaamiyaa dalka, sida askariga u hoggaamiyo tankiga, wax kasta oo dalka ka dhaca adigoo madax ah ka ahna, mas’uul ayaad ka tahay.”
Si ay Beijing ugu ciqaaabto hab-dhaqankeeda ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay, ayaa dowladda Mareykanka waxay toddobaadkan ballaarisay liiska madow ee ay ku jiraan saraakiisha sare ee China ee laga mamnuucay inay helaan Visa-ha ama dal-ku-galka Mareykanka.
Pompeo ayaa axaddii ugu baaqay dhammaan dalalka caalamka in ay diidaan dhaqan celinta China ay ku hayso muslimiinta Uighurs, isaga oo sheegay in ololaha China ee gobolka galbeedka ku yaalla ee Xinjiang uu yahay “isku day ay ku tirtireyso muwaadiniinteeda.”
QM iyo kooxaha u dhaqaaqa bulshada ayaa sheegay in ugu yaraan hal milyan oo ah dadka Uighurs lagu hayo xerooyin xabsiyo ah.